Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan-dRaharina amin'i Francesco Geminiani | Jimmy Page miaraka amin'ny trangam-panjakan'i Générale William Capel Robert Plant - Fikarohana momba ny vatana teraka
Tao amin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy izany Jimmy Page dia ny vatana vaovao indray Francesco Geminiani, Violinista virtuoso italiana iray sy mpamoron-kira niaina tamin'ny 1687 ka hatramin'ny 1762. Mahaliana, amin'ny fampisehoana, Jimmy Page dia manana dia nitendry gitara toy ny siramamy, nampiasa lakolosy kely.
Iray tamin'ireo mpiara-dia tamin'i Geminiani William Capell, Earl of Essex, 3rd, izay nitsena an'i Geminiani rehefa nitsidika an'i Londres izy. Ny fisakaizam-po mahery vaika izay novolavola tamin'ny vanim-potoana ankehitriny, araka ny nambaran'i Ahtun Re dia nanamarina fa i William Capell dia niorina indray tamin'ny Robert Plant.
Francesco Geminiani | Jimmy Page sy William Capel Niverina i Robert Plant mba ho lasa mpitarika guitarista sy mpihira avy amin'ny tarika rock fanta-daza, Led Zeppelin.
Fitoviana ara-batana: Ny endriky ny endrika nataon'i Francesco Geminiani sy Jimmy Page; William Capell sy Robert Plant dia tsy miova.
Innate Past Life Talent: Ny hatsaran-tarehin'ny Geminiani dia naseho tamin'ny alàlan'ny hira gitara nataon'i Jimmy Page.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Ny fisakaizana an'i Francesco Geminiani sy William Capell dia navaozina teo amin'ny fiainan'i Jimmy Page sy Robert Plant.
Fiovana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiaraha-monina: Italiana Francesco Geminiani, fa teraka tany Angletera ny takelaka Jimmy.